Warmly Welcome: သံသယစိတ်တွေ ဖြေဖျောက်လိုက်ပါ
စိတ်ဆိုတဲ့ အမျိုးကိုက အကောင်းတွေပဲ ရသင့်တာကိုး။ အရာရာတိုင်းကို သူက ဦးဆောင်နေတာလေ။
တုိ့တော့ပြောသမျှ ယုံပေးလိုက်တယ်။ မယုံလည်းယုံ့.ပေးတယ်။ ပြောသူစိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့.
အရာရာကိုတော့ အသိနဲ့ သတိ ထားနေရမှာပဲဗျ။ ယုံကြည်သင့်၊ ယုံကြည်ထိုက်မှပေါ့။ လူအကြောင်းပေါင်းကြည့်မှသိတော့ ကြိုတင်ယုံကြည်ထားဖို့ရာလည်း ခက်ခက်ပါပဲဗျာ။
ယုံလွယ် ၊ သနားလွယ်လွန်းလို့ လူအ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။
သံသယဆိုတာ ရန်သူထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ပဲ။
ယုံကြည်မှုဆိုတာ နှောင်ကြိုးတွေကို ပိုခိုင်မာစေတဲ့အရာပဲ။
ယုံလွယ်လွန်းတာ မကောင်းသလို သံသယစိတ် များလွန်းရင်လဲ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းကို သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဘ၀ဟာ စိတ်ကုန်စရာကြီး ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ကိုဝင်းဇော်ပြောသလို ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ တစ်ဖက်သားအပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝထား ဆက်ဆံရင် ကိုယ့်ဆီလဲ မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
...တော်တော်များများက သူများပြောတိုင်းမယုံပေမယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း တွေးကြည့် တယ် ယုတ္တရှိတယ် ဆိုရင် ဟုတ်မယ်မှန်မယ် လို့ ယူဆကြတယ်လေ...။ ညီမလည်းတခါတလေအဲလို ပဲ သူများပြောရင်မယုံဘူး အခြေအနေအမျိုးမျိုးကနေသုံးသပ်ကြ ည့်လို့့ဖြစ်နိုင်တယ်ယုတ္တိရှိတယ် ဆိုရင်ယုံလိုက်တာပဲလေ။ ....................
ယုံကြည်မှုကို နောက်တစ်မျိုးပြောပါဆိုရင် .... သံသယကင်းခြင်းလို့ ပြောလို့ရတယ်.....ဒါပေမဲ့.
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကတော့..အကန်းယုံကို အားမပေးဘူးလေ.... ဒီအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်...
ကာလာမ ပုဏ္ဏားတို့ကို....( မာတက္က ဟေတု)
(၅) မိမိကိုယ်တိုင်တွေးကြံနိုင်ရုံ မျှနှင့်လည်း (ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီသည် ၊ ယုတ္တရှိသည်ဆိုပြီး ) ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု ချက်ချင်းအတည် မယူလေနဲ့ ဆို ပြီး ဟောခဲ့တယ်လေ...။
နောက် ဆုံး ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင် က ပြောခဲ့တာ က သူ့ ကို လည်း မယုံနဲ့ ဆိုတာပါပဲ...။
သိသလောက်လေး ပြန်လည် မျှဝေတာပါ။
((ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားသွားတယ် ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်နဲ့ သံသယစိတ်က အစားထိုး ၀င်ရောက် လာတတ်တာ သဘာဝပါ။))
မှန်ပါတယ်အစ်ကို၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မယုံရတော့ ဘူးဆိုရင် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ထက် ရန်သူတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံရတော့မယ်လေ။ စိတ်ရင်းမှန် သိဖို့ ၊ လူတိုင်း ဟန်ဆောင် ဆက်ဆံတာကနေ ကင်းဝေးဖို့ ၀င်ပွားလိုက်ပါတယ်။
လောကနိယာမလေးတွေ ယူသွားတယ်၊ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ
ဟုတ်တယ်အကိုဝင်းဇော်သံသယစိတ်တွေ ဝင်လာရင် ယုံကြည်မှုတွေပျက်ပြားလာတယ်ဆိုတာမှန်တယ်အကိုရေ။ မှတ်သားစရာလေးတွေ ဖတ်သွားတယ်အကိုဝင်းဇော်ရေ လောကနီယာမလေးတွေပါပဲဗျာ.